Kungqongqiswe owayeyisoka esolwa ngokushisa ingane nendlu
Zimbili Vilakazi | December 29, 2021
UMPHAKATHI waseTrenance Park, eVerulam, obuvutha ungabaselwe, umdinde ngenduku maqede wamshisa waze wafa owesilisa osolwa ngokushisa nendlu ingane yowesifazane abehlekisana naye.
Lesi sigameko senzeke kule ndawo ngeSonto, kanti esokubulawa kwengane sona senzeka ngoMgqibelo.
Echazela Isolezwe unina kaKwanele Mnyandu (7), okuthiwa ushiswe nendlu wuMnuz Mfana Zondi (23), uthe bese kuphele izinyanga eziyisikhombisa ahlukana naye.
UMFANYANA, uKwanele Mnyandu, oshiswe nendlu ngowayeyisoka likanina Isithombe: Sithunyelwe
Uthi ngesikhathi behlukana kwaba sengathi uyasiqonda isizathu esasiholela ekutheni bahlukane kodwa kuse ngokunye uma esethushuka ngolaka ngoMgqibelo.
“Ngicabanga ukuthi into emdine kakhulu ukuthi angifice emnyango ngixoxa nobaba wayo ingane, wavele wacabanga ukuthi siyathandana, kanti cha. Uvuke ngolaka ebuza ukuthi ufunani ubaba wengane lana? Kanti naye ubaba wengane uzobhoka ngolaka, wambuza ukuthi yena ulandeni ekhaya?” kusho uNksz Mnyandu.
Uthi umufi uvele wadikila, wazenza umuntu ohambayo.
Uthi emveni kwesikhashana ehambile, basukile nobaba wengane bahamba baphuma ekhaya emphelezela.
“Ngiyacabanga ukuthi kuthe ngaleso sikhathi sisahambile, wabuya ngoba ngithe uma ngithi ngiyabheka emumva ngabona kukhona into ayijikijelayo ngewindi, maqede kwagqamuka amalangabi.
“Sijikile saphindela emumva sayobheka ukuthi kwenzekani? Kanti nomakhelwane abaseduze nabo bese bebonile ukuthi kuyonakala. Ngesikhathi abanye bezama ukucisha, abanye bebemjaha, ebaleka,” kusho uNksz Mnyandu.
Uthi umlilo ubehlule ngoba abakwazanga ukusindisa lutho obelungaphakathi.
Uthi bese bezama ukuphakamisa izinkethe ebese zishile ngesikhathi bebona ukuthi uKwanele ushe nayo indlu.
“Ngithuke kakhulu ngibona ukuthi lo muntu kanti akashisanga nje indlu kuphela kodwa ubulele ngisho nengane yami. Bengingazi ukuthi ingane ibingaphakathi endlini ngoba bengazi ukuthi izolala kubo kwesihlobo ebisiyivakashele emini. Ngokubuka kwami, okusho ukuthi ibuyile ngazo izikhathi zantambama, yangena endlini yalala. Okusho ukuthi mina ngixoxa nobaba wayo nje emnyango, vele yona isendlini,” kusho uNksz Mnyandu.
Uthi ibuhlungu indlela ingane yakhe ebulawe ngayo kodwa inhliziyo yakhe igezekile ngeSonto ngesikhathi umphakathi umphindiselela kumbulali.
“Ukwazi ukuthi naye uhambe ngendlela efanayo nale abulele ngayo ingane yami, mina kuyangithoba amanxeba yize kubuhlungu ukuthi angeke isabuya. Ukwazi ukuthi naye angeke ngisaphinde ngimbone ngamehlo ami, kuyawuthoba umoya wami,” kusho uNksz Mnyandu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbele, ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa asesiteshini saseVerulam aphenya icala lokubulala nelokufa komuntu.